September 25, 2020 175
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि शुक्रबारदेखि लकडाउन कडाइ गर्न लागिएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयरहरू,
प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर शुक्रबारदेखि लकडाउन कडा बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा सहभागी एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार भोलिदेखि आवातजावातको चेकिङमा थप कडाइ गरिनेछ।
कोरोनाविरूद्ध लडाइँमा सबै एकजुट भएर जाने पनि छलफल भएको उनले बताए। बैठकमा सहभागी मेयरहरूले भित्री सडकमा पनि चेकमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी सबैखाले पास रद्द गरिदिएको छ।
जिल्लामा पास दिनुपरे प्रजिअहरूले गृहकै समन्वयमा पास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसअघि सरकारले खोल्ने भनेका ४२ उद्योगका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न मेयरहरूले बैठकमा आग्रह गरेका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट दुई सय ४६ जना संक्रमित छन्। काठमाडौं, भक्तपुरमा कोरोनाका संक्रमित देखिएका छन्।काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि शुक्रबारदेखि लकडाउन कडाइ गर्न लागिएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयरहरू,
जिल्लामा पास दिनुपरे प्रजिअहरूले गृहकै समन्वयमा पास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसअघि सरकारले खोल्ने भनेका ४२ उद्योगका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न मेयरहरूले बैठकमा आग्रह गरेका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट दुई सय ४६ जना संक्रमित छन्। काठमाडौं, भक्तपुरमा कोरोनाका संक्रमित देखिएका छन्।
Prevहातमा कति शं’ख चक्र छ के फल दिन्छ ? जानी राखौ
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्नन सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित
उच्च अदालतले माग्यो को’रोना नियन्त्रणमा गरेको कामको विवरण